अरू मानिसहरूलाई तपाईंको दिन बर्बाद गर्न अनुमति नदिनुहोस्। - बेनामी - उद्धरण प्याडिया
जीवन अनमोल छ। हाम्रो जीवनमा मानिस विशेष छन् तर सम्बन्ध विकासको प्रक्रियामा, हामीले आफैलाई बिर्सनु हुँदैन। हामी हाम्रो आवश्यकता र सिद्धान्तहरूको साथ हर समय सम्पर्कमा रहनुपर्दछ।
जीवनमा प्रत्येक दिनको एक उद्देश्य हुनुपर्दछ र हामी के चाहन्छौं त्यसको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ। हाम्रो मार्गमा के हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सधैं सम्भव हुँदैन, तर हामीले आफ्नो शर्तमा जीवन बिताउने प्रयास गर्नुपर्दछ उत्तम तरिका।
हामीहरूको दिमागमा स्पष्ट योजना हुनुपर्दछ कि हामी कसरी हाम्रो जीवन छोटो अवधि र लामो अवधिमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं। जब र जब हामी परिवर्तनहरू आउँदै गरेको देख्छौं, हामीले यसलाई अनुकूलन गर्न र अगाडि बढ्नुपर्दछ। यो अवश्य हो, काम भन्दा सजिलो छ तर हामीले जीवन र यसका परिवर्तनहरूको सामना गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्दछ।
अनुकूलन र अगाडि बढ्ने को खोजीमा, हामी सबै व्यक्तिको सर्कल विकास गर्छौं जसमा हामी परस्पर निर्भर छौं। तर कहिलेकाँही हुन सक्दछ जब केहि मानिसहरू ज्यादै गहिरो हुँदै जान्छन् र ती हुन सक्छन् हाम्रो भित्री घेराबाट।
त्यसोभए, तिनीहरूबाट शुरू गरेर कुनै अन्य बाहिरी व्यक्ति जसले उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने शक्ति छ भनेर सोच्दछ, तपाईं त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नु पर्छ। कहिलेकाँही हामी आफुलाई यति धेरै माया गर्छौं कि हामी आफैमा नियन्त्रण गुमाउँछौं। हामी तिनीहरूलाई राजीखुसीसाथ अतिशक्ति दिन्छौं।
यसै ठाउँमा संयमको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ र हामी होशियार हुनुपर्छ कि हामीले आफ्नो जीवनमा कसैलाई कहिलै पनि माथि नराख्नुहोस् ताकि उनीहरूले हाम्रो दिनलाई बिगार्न सकून्। यदि हामी बाँच्न को यो तरिका मास्टर गर्न सक्षम छौं, तब हामी हाम्रो जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्दछौं.
दुखद उद्धरण नगर्नुहोस्
तपाईंको जीवनमा व्यक्तिहरूको बारेमा उद्धरण
एक व्यक्ति जसले सराहना गरेको महसुस गर्छ सधैं अपेक्षा गरेको भन्दा बढी गर्छ। - बेनामी
प्रशंसा गरिएको महसुस गर्ने व्यक्तिले उसले वास्तवमै गरेको अपेक्षा गरेको भन्दा बढी गर्छ! हो, त्यो खडा छ ...
एकचोटि तपाईंले कसैबाट टाढा रहनुभयो जस्तो महसुस गर्नुभयो भने फेरि तिनीहरूलाई व्याकुल नपार्नुहोस्। - बेनामी
एकचोटि तपाईलाई कसैले पनि बेवास्ता गरे जस्तो लाग्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं उनीहरूलाई फेरि कहिले पनि सताउदै हुनुहुन्न।
नराम्रो हिजोको बारेमा सोच्नुहोस्। यसलाई जान दिनुहोस्। - बेनामी
तपाईंको हिजो राम्रोसँग नहुन सक्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्ना सबै आशाहरू हराउनुहुनेछ ...
भगवानले तपाईंको पीडा देख्नुहुन्छ। उसले एक अवसर प्रदान गर्नेछ। उसले एउटा बाटो प्रदान गर्नेछ। पहिले भन्दा ठूलो र ठूलो - बेनामी
तपाईं आफ्नो जीवनमा धेरै दयनीय अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ तर सम्झनुहोस् कि जीवनले तपाईंलाई सिकाउनेछ…